MUUQAAL: Puntland oo ka hadashay Wixii ka dhacay Laascaanod, Wacadna ku martay inay Somaliland ka saarayso | KALSHAALE
MUUQAAL: Puntland oo ka hadashay Wixii ka dhacay Laascaanod, Wacadna ku martay inay Somaliland ka saarayso
Jun 14, 2018 - 11 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Guddiga difaaca Puntland, ayaa si kulul uga hadlay Xaalada magaalada Laascaanood oo maanta ciidanka maamulka Somaliland ay ku dhaawaceen dad shacab ah, kadib markii ay rasaas ku fureen.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland oo shir jaraa’id ku qabtay Garowe, ayaa nasiib darro ku tilmaamay in maamul Somaliland uu maalin kasta si badheedha ah ugu xad gudbayo shacabka gobolka Sool, Wuxuuna sheegay inaysan Puntland ka dulqaadan doonin oo Arintaasi ay Ficil ahaan uga Jawaab celin doonto.
Dhinaca kale wuxuu sheegay in labadii haween ee lagu dhaawacay Laascaanod, iyagoo loosoo qaadi lahaa magaalada Garoowe, si loogu dabiibo in la celiyay loona diiday in Garoowe loo gudbiyo, Wuxuuna si cad u sheegay in Somaliland ay xabbad uga saaridoonaan magaalada Laascaanood.
War wamaxay cabaadku yaabaa ciidkii gaadhayba kkkkkk soowtaynu isku ogayn dib u hadli mayno ntaan ciidka ku tukunayno laascaanod.
Cabaad weenayaal…Welcome to Tukaraq.
Dumarkiyo caruurta haku cadho burburiNa
Ee ragga iska celiya.
Xaasakiini baad gowracdeen,saw ceeb maahan
Gunimo waad Ku can baxdeen.
Welcome back hu u no ciid mubarak.
Huuno dumar & caruur awalba heshiis baanu ahayne soow niman fulay ah oo madax sheeganayaa oo garowe joogaa intay 50$ dollar oo zaad ah usoo direen may dhihin mudaharadaa anaku awood aanu idinnkusoo gurmano mahaynee aanu intaasuun beesha caalamka tusnee.
Dee aniguna wuxun baan tusaayay inaan cid iga soo gaadhin kartaa jirin oo uso gurman kartaa.
Waabaa intas huuno may fahantay…
Huuno gabadha dhaawaca ah ee diraca green ka ah sidataa ee Mobile ka cade laga dakhray sidatay ma adiguu ahaa.
Ciid Mubarak Inaabt😂😂
Waa la is hayaaye waxba naagaha iyo carruurta ha ku meeraysan. Naag baan dhaawacnay miyaad maanta faan moodeen?
Laascaano mar dhow waad ka huleelaysaan idamka Alle waana muuqataa in dadka dulqaadkii ka dhamaaday.
Adigu soow dumarka maad soo dirin xagii raga laga sugaayay dee, maxaad dumarka usoo dirtay iyo caruurta ood u tidhi ku mudaharada laascaanod, miyaadan ogayn in meesha nin sOmalilander la dhahaa oo axmaq ah oo aan dumar & caruur toona u tudhayni haysto?!
Ka xaabxaabi heee boowee waakaasee hadaba, qarjab iyo qraan jecel usheegaa inaan dumar & caruur dal ama dhul lagu xorayn.
Kolba islaan iyo dumar 100 $ losodiro oo layidhaa muusanaaba ayay dhabayaco dagaalkii ubadashay kkkkkkkkk kkkkkkkkk iidii waa Bari Haan idin xasuusiyeen laaska miyaanu qarjab kutukanayn
Maryooley iyo kulli ardul muslim, ciid Mubarak wa kulul yown wa antum bikhayr.🌴🌷🌼🕌🌿💐
Dagaalka Laylatul Qadarka habeenkii u dambeeyey iyo Ciida u kaadsada.
Aniga ruuxayga karbaash ayaan sitaa oo rabaa in rag la dhaco, Bacadle ciid.
Naago Harti ah oo Laascaanood lagu jiidayo, waa la isaga daba imaan.
Landbon Punt says:
Qosolka yarayso, ma ciyaalbaad la sheekaysanaysaa?
inta Dhulbahante xabadda kuu ridayo ayaad qosli kartaa oo Laaska joogi kartaa!
Aniga iyo adiga waa wada ognahay in Sool lagu joogin xoog Isaaq.
Mise waxbaa i dhaafay aanan ogeyn!
Waxaan oshan lahaa wixii dhib iyo dhimasho keenayaka waantoow gaasoow tv gaj jam somland inaad daawataan baa qalad idinku ahayd horayso immikana waxaa idinla quman inaad hawada k sartaan idinkoon buuqin dee qalad baabay idinku ahayd fiirsashadiisu mana ahan hadal siyaasiyiini ku hadasho a